Tronsmart ONYX PRIME, kuongorora uye kuita | Gadget nhau
Kutsvaga mamwe mahedhifoni asina waya? Sezvaungave waona, iri harisi basa riri nyore, ukapihwa huwandu hukuru hwesarudzo pari zvino pamusika. Naizvozvo, kuti ikubatsire iwe mubasa rekupedzisira kuwana Yechokwadi Wireless mahedhifoni aunoda, nhasi tinounza Actualidad Gadget itsva, inopfuura inonakidza sarudzo, iyo Tronsmart ONYX PRIME.
Takakwanisa kuyedza idzi Tronsmart mahedhifoni kwemazuva mashoma uye ipapo tichakuudza zvese nezve ruzivo rwedu rwekushandisa, maficha atinogona kuwana uye mutengo waunogona kuwana imwe kana vakasarudzwa.
2 Iyi ndiyo Tronsmart ONYX PRIME
3 Zvimiro zvinopihwa neTronsmart ONYX PRIME
Sezvatinoita nguva dzose, tinokuratidzai zvose kuti tinogona kuwana mukati mebhokisi reONYX PRIME naTronsmart. Senguva dzose, tinogonawo kutaura kuti hatina kuwana zvinoshamisa. Isu tine zvedu headphones, the kuchaja kesi, UN manual mushandisi uye UBS Rudzi C tambo kuchaja bhatiri mukesi.
Buy the Tronsmart ONYX PRIME paAmazon pamutengo wakanakisa
Kune vamwe vose, tinowanawo mamwe mashoma maseti emapadhi kugadziridzwa kwehedhiseti, kuve nehukuru hutatu hwakasiyana, pamwe neiyo yakanamirwa. Pamusoro pazvo, tinewo mamwe maviri "rubber zvindori", yehukuru hwakasiyana, iyo inoshumira kuti ibudirire zviri nani zvemusoro mukati menzeve.
Iyi ndiyo Tronsmart ONYX PRIME
Iyo Tronsmart ONYX PRIME vane fomati "munzeve", asi ivo vane peculiarity mudhizaini yavo iyo vashoma vagadziri vakasarudza kubatanidza mahedhifoni avo. Kufanana nemamwe akawanda mamodheru, aya Tronsmart mahedhifoni zvine nharo dzemapedhi nzeve izvo zvinosara mukati menzeve uye zvine basa rekuita vacuum effect. Kune izvi tinozviwana hukuru hutatu hwakasiyana.
Iyo ONYX PRIME zvakare ine imwe kuwedzera rabha mhete iyo iri kumhiri kwemaikorofoni. Anoshumira pkuitira kuti handset iwedzere kugadziriswa nzeve dzedu uye kuti haigoni kufamba kana kuwa. Kuwedzera kudiki kunovaita a akanakisa sarudzo kana uchitsvaga mahedhifoni ekuperekedza panguva yekurovedza muviri mutambo. Chishongedzo chatakanga tatoona mune mamwe mamodheru uye kuti mushure mekuedza tinogona kupupurira kuti vanozadzisa basa ravo. Isu tinewo hukuru hutatu hwakasiyana kuitira kuti kukwana kuve kwakakwana. Ndizvo zvawanga uchitsvaga here? Tora yako Tronsmart ONYX PRIME paAmazon nekutumira mahara.
Mahedhifoni ane compact sizeIwo madiki muruoko uye kunyanya patinoapfeka. Zvishandiso zvekuvaka, in glossy mapurasitiki, uye huremu hushoma hwainahwo hunoita kuti tisaone kuti takadzipfeka. Chimwe chinhu chakakosha kune avo vanoashandisa kwemaawa kana pakutamba mitambo.
Muchikamu chiri kunze kwenzeve, pamusoro peiyo logo yekambani, iyo kubata kubata. Navo tinogona dzora mimhanzi yekutamba, svetuka nziyo kumberi kana kumashure, kumbomira kana kutanga kutamba. Munzvimbo imwe chete tinowana a maikorofoni iyo ichashandiswa kudzora inoshanda kudzima ruzha. Uye pazasi, tine a akatungamira mwenje iyo inotitaurira kana kubatana kuri kushanda, kana chiyero chebhatiri chega yega yega.
El mhosva yekuchaja, uko mahedhifoni anozorora pakuchaja, inogadzirwawo nepurasitiki nhema, mune iyi kesi ine matte kupera. Iwo mahedhifoni anokwana zvakakwana nekuda kweiyo os magnetized pini. Uye vanopa kusvika kumatatu ekuwedzera akazara kuitira kuti kuzvitonga kwe ONYX PRIME vanokwanisa kufambirana nesu. Iwe unogona ikozvino kutenga paAmazon iyo Tronsmart ONYX PRIME mutengo wakanakisa.
Zvimiro zvinopihwa neTronsmart ONYX PRIME
La kuzvitonga Ndicho chimwe chezvinhu zvatinogona kufunga zvakanyanya kukosha pakusarudza pane imwe kana imwe modhi. Isu tine kubereka kwe mimhanzi yakaramba ichienderera kwemaawa masere pamutoro mumwe nomumwe. Y maawa anosvika makumi mana kana tine charger case.
La connectivity nderimwe remasimba avo sezvo vakashongedzerwa nehunyanzvi MAKARALI USB 5.2. Kurumidza uye isina musono kubatana nguva dzese. Uye thanks to Qualcomm 3040 chip, tinowana yakagadziridzwa mhando yekuteerera inoita kuti kuterera kuonekwe kuve nani.
Isu zvakare tine iyo yakagadziridzwa Yechokwadi Wireless Stereo Plus tekinoroji. Iyo inokwanisa kudzora kuti kushandiswa kwemahedhifoni maviri kwakaenzana. Uye inounza kuvandudzwa kunoonekwa mukugadzikana kwekubatana. Uyezve kuverenga pane Active kudzima ruzha pane neQCC3040 chip inopa inogutsa kwazvo mushandisi ruzivo.
La sound sound Vanopa zvinopfuura zvinotarisirwa.
Autonomy kusvika kumaawa makumi mana pasina kudiwa kwemapulagi.
Chigadzirwa yakakwana yemitambo.
Size yekesi yekuchaja uye mahedhifoni pamusoro peavhareji.
La kugadzirisa rabha Inogona kunge isina kugadzikana, kunyange zvakakosha kuti ukuru hwakarurama.
Kudzokorora kwe: Rafa Rodriguez Ballesteros
Yakatumirwa pa: December 26 we2021
Kugadziridza kwekupedzisira: December 25 we2021
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Tronsmart ONYX PRIME, kuongorora uye kuita